Isu sii diyaari kulanka aad la yeelanayso Xafiiska Shaqada
Waxaad kulanka u soo qaadaneysaa warqadda go’aanka sharciga degganaanshaha ee aad ka heshay Hay’adda socdaalka. Waxaad u baahantahay inaad soo qaadato wax caddaynaya aqoonsigaaga. Haddii aad heshay lambarka shakhsiga ah waa inaad soo qaadato kaar aqoonsi. Soo qaado xitaa shahaadooyinka iyo caddaymaha shaqooyinkaagii ama waxbarashooyinkaagii hore. Wixii su’aalo ahna sii qoro.
Qofka aan ahayn, magangelyadoon ama qaraabo